ကူးစက်ရောဂါ, ဆေးပညာအထူးပြု - ဆေးများ. ကူးစက်ရောဂါဆေးပညာ က
ကူးစက်ရောဂါ, ဆေးပညာအထူးပြု - ဆေးများ. ကူးစက်ရောဂါဆေးပညာ ကို Infectiology ဟုလည်း ခေါ်ဆိုပြီး ရောဂါကူးစက်မှုများကို ရှာဖွေခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းမ ..
ကူးစက်ရောဂါ (ဆေးပညာအထူးပြု), ဆေးများ. ကူးစက်ရောဂါ (ဆေးပညာအထူးပြု),